Nezvedu - HEBEI DEBIEN TECHNOLOGY CO., LTD
Mumakore achangopfuura, Debien aona kuwedzera kwekuziva muinjiniya munda uye wepasirese munda, hwakagadzwa hurefu uye hwakagadzikana kudyidzana hukama neakakurumbira mabhizinesi uye akati wandei epasi rose mapoka muminda senge peturu, petrochemical, kuchengetedza mvura uye simbi uye akaita kuti chiono chayo chive chokwadi . Debien anonamira kukosha kumashure-ekushambadzira masevhisi, inoenderera nekuvandudza mushure-yekutengesa sevhisi mashandiro: iri basa raDebien uzivi ndiko kugara wakanangana nevatengi uye nekupa nekukurumidza-kupindura uye masevhisi emhando yepamusoro. Isu tinozvipira kuti takagara takagadzirira kubatsira kunyangwe uri kupi.
Shanduko dzakakura dzaitika muindasitiri yekuChina yekugadzira pakati pekushandurwa kwenzanga dzechiChinese kubva mukumhanyisa-mhanyisa kuenda kusimukira kwepamusoro Iyo indasitiri yekugadzira inombundikira mikana isingaenzaniswi yekusimudzira. Zvisinei, matambudziko anouya anokoshawo kune rimwe nerimwe bhizinesi. Debien akagadzirisa zano rake rekuchinja kubva padanho repamusoro-soro kweanopfuura makore makumi maviri kuenda mukusimudzira kwepamusoro; uye shanduko kubva kune hombe yekugadzira vharuvhu muChina kuenda kune akasimba vharuvhu mugadziri muChina, panguva iyo, Debien inotarisana nehunhu, inovavarira pahunhu hwevatengi, inovandudza bhizinesi kupesana nehuremo hwe "Yakagadzirwa muChina 2025", "Indasitiri 4.0" uye zvakakosha hunyanzvi hunyanzvi, kusimudzira girini, kusimudzira kusimudzira, kusimudzira vanhu. Isu tinotenda kuti Debien achamira kunze muindasitiri yekugadzira muChina aine chifananidzo chitsva munguva pfupi iri kutevera.
Debien anovavarira kumusoro uye inobatanidza zvese zvakasiyana. Inokwezva pfungwa dzakanakisa kubva pasirese pasirese ine hunyanzvi hwekubatanidza uye inopa danho revanhu vanotungamirwa nechinangwa vane zviroto uye zvishuwo zvekuratidzira matarenda avo nekuvandudza kuzvibata kwavo. Mune musimboti we "kutenda kwakanaka uye mhando kutanga", tinoita shamwari kubva pasirese pasirese uye tinogamuchira shamwari dzakawanda kuti dzibatane naDebien uye tishande takabatana neramangwana riri nani.